China EPP kupholile Box mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
Ibhokisi epholileyo ye-EPP, enombono ofanayo njengebhokisi yethu epholileyo ye-EPS, kodwa yenziwe ngolunye uhlobo olutsha lwezinto ezinogwebu ngokusebenza ngcono, ukuzinza okungcono ngaphandle kwamasuntswana amagwebu abhabha apha naphaya njengoko kwenza i-EPS. Ngaphezu koko, bakudidi lokutya kwaye banobuhlobo kwindalo esingqongileyo.
I-EPP (iPolypropylene eyandisiweyo) Ibhokisi epholileyo
I-1.EPP ibhokisi epholileyo, enombono ofanayo njengebhokisi yethu epholileyo ye-EPS, kodwa yenziwe ngolunye uhlobo olutsha lwezinto ezinogwebu ngokusebenza ngcono, ukuzinza okungcono ngaphandle kwamasuntswana amagwebu abhabha apha naphaya njengoko kwenza i-EPS. Ngaphezu koko, bakudidi lokutya kwaye banobuhlobo kwindalo esingqongileyo.
2.EPP.ie Yandisa ezinepolypropylene, luhlobo lwezinto ezisandula kuphuhliswa ngokukhawuleza. Ngobunzulu obuphezulu, ubunzima bokukhanya kunye nokuqhuba kakuhle kwe-thermal ukuze zingonakali lula kwaye zinike ukhuselo olungcono kakhulu kwiimveliso zakho kunye nokugcina ubushushu obuzinzileyo ngaphakathi kwebhokisi. Yenziwe ngezinto ezinobuhlobo ezinokusetyenziselwa ukuphindaphinda kwaye ekugqibeleni zithotyiwe emva kokusetyenziswa.
3. Ngaphandle kokusebenza kwayo ngokukuko ekukhuseleni nasekugqobeni, ziyangqubana nokungqubana kwaye zinokucocwa ngokulula. Imele ukusetyenziselwa ukuhanjiswa kwempahla, ngesiqhelo ukutya okutsha, isidlo kunye namayeza.
I-4.Ingabhalwa kunye nezixhobo ezifunekayo.
Ibhokisi epholileyo ye-1.EPP yenzelwe ukuba iqulethe iimveliso njengesikhongozeli kunye nokuthintela izinto eziqulathiweyo kubanda nomoya oshushu otshintshisanayo okanye oqhubayo kunye nendawo engaphandle.
Kwimihlaba yokutya esandula ukwenziwa, zisetyenziselwa ukuhambisa ukutya okutsha, okonakalayo kunye nobushushu, njengoku: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo kunye nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, i-ayisi khrim, itshokholethi, iilekese, iikeyiki, iikeyiki, itshizi, iintyatyambo, ubisi, njlnjl. Okwangoku kwamanye amazwe, baya besanda ngokuthandwa ngakumbi ekuhambiseni iibhokisi ezininzi zepitsa.
Ukuthunyelwa kwamayeza, iibhokisi ezipholileyo zihlala zisetyenziselwa ukuhambisa i-reagent ye-biochemical, iisampulu zonyango, ichiza lezilwanyana, iplasma, isitofu sokugonya, njl.
Ngelo xesha, zikulungele ukusetyenziswa kwangaphandle kunye nejeli yethu yomkhenkce okanye isitena somkhenkce ngaphakathi kwebhokisi, ukugcina ukutya okanye iziselo ezibandayo xa usenkampini, iipikniki, ukuhamba ngephenyane kunye nokuloba, kuba kulula, ukungqubana nokungqubana kwaye kulula zicocwe.
5. Kwaye ngakumbi nangakumbi abathengi bacela ibhokisi encinci ye-EPP enemibala emincinci kwimveliso yabo encinci enje ngewotshi, kuba ijongeka ngathi isiphelo esiphezulu, sithambile kwaye sinemveliso entsha kraca.
Ubungakanani bangaphakathi （cm）
60 * 40 * 25
54 * 34 * 20
48 * 38 * 40
42 * 32 * 34
56 * 45 * 38
50 * 39 * 32
66 * 51 * 38
60 * 45 * 31
66 * 52 * 50
60 * 45 * 42
Qaphela: Iinketho ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka.
Grade 1.Food kunye nezinto nokusingqongileyo;
2.Excellent conductivity thermal kunye mninzi
3.ukuzimisela okungcono kunye nokungqubana okungadibaniyo
4. Ukukhanya kwendalo kwaye kulula ukuba icocwe
5.Imilo entle kwaye ijongeka ngathi isiphelo siphezulu
6.Xhasa amaxesha amaninzi okusetyenziswa kwaye uthotyiwe emva kokusetyenziswa
Ibhokisi epholileyo ye-1.EPP yenziwe ngezinto ezinobuhlobo ezinokusetyenziselwa ukuphindaphinda kwaye ekugqibeleni zithotyiwe emva kokusetyenziswa.
3.Ngokusebenza kwayo kokukhusela kunye nokugquma, zisetyenziselwa ukuhambisa ukutya okutsha kunye namayeza, ngakumbi ukutya, iziqhamo kunye nemifuno.
Ukusetyenziselwa ngokwakho, zilungile ibhokisi epholileyo yokutya kunye neziselo xa uphuma ngaphandle.
Izixhobo ezenzelwe wena ziyafumaneka kwiimfuno zakho.
Egqithileyo Ibhokisi epholileyo yeVIP
Okulandelayo: Ibhokisi yePlastiki epholileyo